एनआरएनए सुधारको लागि पुर्व अध्यक्ष डा. पौडेलद्धारा अपिल – Everest Times News
२०७६ माघ १, बुधबार २३:४१
गैरआवासिया नेपाली संघ ( एनआरएनए) अमेरिकामा दुई कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेका डा केशव पौडेलले गैरआवासिया नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय समितिलाई सस्थागत सुधारको लागी विशेष अपिल गरेका छन । एनआरएन अमेरिकाका पुर्व अध्यक्ष डा. पौडेलले बुधाबार एक विज्ञाप्ती मार्फत सस्थागत रुपमा हालसम्म हुदै आएको गलत कार्यहरु औल्याउदै आगामी दिनमा सस्थाले सही गति लिओस भनी अपिल गरेका छन ।
विज्ञाप्तीमा डा. पौडेलले गत वर्षको अक्टुबर १५ देखि १७ सम्म काठमाडौमा भएको ९ औ विश्व सम्मेलनको बेला भएको उत्श्रृखल गतिविधिले सवै गैरआवासिया नेपालीहरुलाई हिनताबोध गरेका उल्लेख गरेका छन । विश्वभरिकै नेपालीहरु भेला भएको ९ औ सम्मेलनमा एनआरएनए आइसिसिको आर्थिक प्रतिवेदन पास नहुनु र संगठानिक मेरुदण्डको रुपमा मानिने विधान पास नहुनु दुखद पक्ष भएको बताउदै कमजोर नेतृत्व र व्यवस्थाकिय त्रुटि भएको उल्लेख गरेका छन । यस्ता गलत कुराहरु सच्चीदै सस्थालाई सही दिशामा अगाडी बडाउन सबैमा अपिल गरेका छन । पुर्व अध्यक्ष डा पौडेलले जारी गरेको विज्ञाप्ती जस्ताको त्यस्तै ।
प्रतिनिधिको छनौटको काम सम्मेलन हुनुभन्दा कम्तिमा १ महिना अघि हुनुपर्दछ । हामी गैर आवासीय नेपालीले सिकेको सीप, अनुभव र काम गर्दा अपनाइने प्रक्रियागत कार्यलाई नेपालमा स्थानान्तरण गर्ने कुरा गरिरहँदा हाम्रो आफ्््नै संस्था संस्थागत दिशामा अघि बढ्न नसक्नु अत्यन्तै खेदजनक छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्ने, तर गर्न नसक्ने कार्य बढ्दै गएको छ । यसले गैर आवासीय नेपालीप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको छ भने एनआरएनए संस्थाप्रतिको विश्वास र भरोसामा आघात पुगिरहेको छ । आवश्यकता एउटा र काम अर्कै भइरहेको छ । एकप्रकारले भन्दा मनोमानी बढेको छ । यो संस्था विश्वभर रहेका गैर आवासीय नेपालीको पसिनाले सिञ्चित संस्था हो । यसको हेक्का हामी सबैले राख्नैपर्दछ । नयाँ नेतृत्वले नेतृत्वमा आए पश्चात अब सदस्यता शुल्क नलिने जुन घोषणा गरेको थियो, त्यो एकदमै प्रशंसनीय काय हो । यदि त्यो योजनावद्व रुपमा व्यवहारिक पक्षलाई समेत अध्ययन गरी सस्तो लोकप्रियता भन्दा माथि उठेर ल्याइएको हो भने त्यसको सुरुवात तत्काल गर्न पनि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।